Ku habboon Mango guga 2017 | Ragga Stylish
Shuruucda Tailoring xaq u, Mango Man tifaftirkiisii ​​ugu dambeeyay wuxuu u heellan yahay dharka laga bilaabo shirkadda guga / xagaaga 2017.
Buug-gacmeed aad u dhiirrigelin ah oo ka bilaabmaya dawaarka caadiga ah illaa isku-dhafnaan badan oo dabacsan oo raaca a xariiq Sare / hooseeya.
Shirkada Isbaanishka waxaa ka go'an silhouettes si fiican loo qeexay, inkasta oo marada laga soocayo jirka iyadoo la tixgelinayo qaabka ugu badan illaa iyo hadda, khafiifka ayaa ku habboon.
Marka laga qiimeeyo waxa lagu arkay uruurinta ugu dambeysay ee guryaha moodada ugu muhiimsan, waa in laga filaa in moodooyinka dabacsan ay gacanta ku dhigi doonaan. Si kastaba ha noqotee, dharka adagi meelna uma socdo xilligan. Soo ururinta cusub ee Mango, labada noocba waxay kuwada nool yihiin is afgarad buuxa.
Midabada midabku waxay ka kooban tahay oo keliya codad dhexdhexaad ah, iyo xitaa sidaas suudhku wuxuu soo baxayaa iftiin badan, taas oo ah waxa laga filayo suunka xagaaga.
Sirtu waxay ku jirtaa hooska iftiinka buluug, bunni iyo cawl, in kasta oo ay sidoo kale jiraan tanaasullo u dhexeeya fasalada madow iyo kuwa badda.
Bandanas qoorta, laalayaasha iyo qoorta Mandarin iyo surwaal halkii shaati caadi ah iyo xarkaha la xidhi lahaa ku neefso casriga casriga muuqaalka, iyaga oo u soo dhaweynaya dhalinyarada, oo fikradooda ku aaddan xirashada suudka ay aad uga duwan tahay tan jiilalkii hore.
Kabaha ayaa ku kala duwan inta udhaxeysa kabaha dharka ee dharka ugu quruxda badan iyo kabaha isboortiga ee iskudhafka ugu caansan, in kasta oo had iyo jeer la xirto sharaabaad la'aan, sida looga baahan yahay surwaalka canqowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Cambaha ayaa soo bandhigaya ku habboon guga / xagaaga 2017